Indlela eyiyo nguBruce Hornsby kunye noHlelo - Okunye
Le ngoma ijongene noMbutho wamaLungelo oLuntu eMelika. Umgca kumazwi athi 'Umthetho owapasiswa ngo'64' nguMthetho wamaLungelo oLuntu wango-1964.
Amagama akule ngoma ajongana nesidingo sokumelana nokungakhathali kwaye ungaze uzirhoxe ekungabikho kokusesikweni ngokobuhlanga njengemeko ekhoyo.
Esi sisibetho esingaqhelekanga kakhulu, eswele ikorasi enkulu, utshintsho kwisantya, amagwegwe abambekayo kunye nezinye izinto ezininzi zetshathi-yetshathi. Ngesimo esingaguquguqukiyo kunye nesandi esine-jazz, kuye kwabhenela abaphulaphuli abadala ngakumbi kwaye kongeze ukwahluka okwamkelekileyo kuluhlu lwadlalwayo oluPhezulu lwama-40 olwalulawulwa yimixholo ephezulu, iingoma eziqhutywa yi-synth. Yayiyingoma yabantu abadala ebathandayo kwaye abantwana babo banokuyinyamezela, bafikelela phezulu kuzo zombini i-Hot 100 kunye neetshathi zaBadala abaDala.
I-Hornsby yakhulela eVirginia, ekungekho apho ungayilindela khona ingoma malunga nokunyamezelana ngokobuhlanga kunye noqoqosho. Ukhule enala maxabiso nangona. Hornsby uxelele I-NME Umama wayevela kwindawo yase-New England, kwaye wayekhanyiselwe ngakumbi ngezifundo zobuhlanga kunabantu abaninzi base Mzantsi. Ke bendinemo yokwahluka kubahlobo bam abaninzi abanabazali ababethanda indalo. '
Wongeze wathi: 'Xa ndikhuliswayo, i-vibe endayifumana kuMartin Luther King edolophini yam kukuba wayeyindoda ekhohlakeleyo-nje vibe emoyeni, ukuba wayoyikeka. Kwaye ukuba ukhulele kuloo ndawo akunakukunceda kodwa uchaphazeleke kuyo kancinci. Ngethamsanqa, ndaphuma kusapho olwalusikhusela kule conservatism, kodwa ngokuqinisekileyo, ndikhule phakathi kwezo mvakalelo zimbi. '
UHornsby ebesebenza njengombhali wengoma iminyaka engenalo ithamsanqa lokufumana irekhodi. Ngemizamo yakhe yokubhenela kwincasa eyaziwayo esilela, wagqiba kwelokuba enze idemo yeengoma ngesitayile sakhe- i-ECM jazz- kwaye wafaka le ngoma. Wathumela idemo kwilebula entsha ebizwa ngokuba yiWindham Hill, ekhethekileyo kumaqela ezwi. Bathembisa ukumnika isivumelwano, kodwa ke benza nezinye iilebhile eziphambili eziye zabanjwa. U-Hornsby watyikitya ne-RCA kuba bamnika inkululeko yokuyila. Bavuzwa xa le ngoma kunye nealbham baba ziintsimbi ezinkulu.
Umphathi werediyo olondolozayo uSean Hannity wasebenzisa icandelo lale ngoma njengengoma yakhe yemiboniso iminyaka emininzi. U-Hornsby, olawulo lwentando yesininzi, wayeneembono ezahlukileyo kwezopolitiko, kodwa kwakungekho nto wayenokuyenza malunga neHannity esebenzisa le ngoma ukuba nje kuhlawulwa imirhumo.
Umqambi uTupac Shakur wasebenzisa oku njengesiseko sengoma yakhe ethi 'Utshintsho,' ejonge ubuhlanga kunye nobomi basezidolophini ngombono omnyama.
Lo yayingowesibini engatshatanga ekhutshwe kwi-albhamu, kulandela 'Yonke iKiss Encinci.' Yayikhutshwa e-US ngo-Septemba ka-1986 kwaye yabetha kwindawo ephezulu ngo-Disemba 13.
I-Hornsby kunye neqela lakhe babengakulungelanga ngqo i-MTV, kodwa ividiyo yale ngoma yenze kakuhle kwinethiwekhi. Kwisiqwengana sokusebenza, akukho mvumi ziye zaphakama- abanye abantu bothuka xa babona uHornby buqu kwaye baqonda ukuba ngu-6 '4'.
chris isaak andifuni ukuthandana
malingatshoni ilanga kum lyrics meaning
abacule thina ziintshatsheli
ain t akukho ntaba eziphakamileyo lyrics